प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. सूर्यनारायण यादवले दिए पदवाट राजिनामा « Etajakhabar
प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. सूर्यनारायण यादवले दिए पदवाट राजिनामा
प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७६, मंगलवार १३:०४
काठमाडौं, २८ साउन । प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. सूर्यनारायण यादवले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यादव नाम चलेका डाक्टर हुन् । सप्तरी १ बाट निर्वाचित उनले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सोमबार राजीनामापत्र बुझाएको सभामुखको सचिवालयले बताएको छ । उनको राजिनामा स्वीकृत हुन बाँकी छ । स्वीकृत भए प्रतिनिधिसभामा सप्तरी १ रिक्त हुने छ । सरकारले आगामी मंसिर १४ का लागि उपनिर्वाचन मिति तोकीसकेको छ ।
आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या बढेकाले आराम गर्न राजीनामा दिएको सांसद यादवले बताए । ‘मलाई डाइबिटिज लगायत समस्या थियो। पछिल्लो समय स्ट्रेस पनि बढिरहेको थियो, त्यसैले आराम गर्न पदबाट राजीनामा दिएको हुँ,’ राजीनामापछि यादवले भने । यादवको राजीनामा स्वीकृत भएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त हुनेछ। त्यसपछि पुनः चुनाव गराउनुपर्छ। हाल प्रतिनिधिसभाको एक क्षेत्र कास्की २ रिक्त छ।